Ciidamada Booliiska iyo Militiriga Soomaaliya oo ku dagaalamay Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidamada Booliiska iyo Militiriga Soomaaliya oo ku dagaalamay Muqdisho
Ciidamada Booliiska iyo Militiriga Soomaaliya oo ku dagaalamay Muqdisho
Iska horimaad dagaal oo aad u culus ayaa xalay waxa uu ka dahacay magaalada Muqdisho kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliiska iyo kuwa malitirga ah.
Iska horimaadka ayaa oo ka dhacay degmada Hodan waxuu udhexmaray ciidamada Booliska iyo Milateriga dowladda, waxaana ku dhintay 2 askari.
Dagaalka oo ka dhacay Xaafada Zone K ee degmada Hodan ayaa sigaar ah waxaa uu udhexmaray Ciidamo ka tirsan Booliska iyo kuwa Milateriga dowladda, isla markaana waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida waraku xaqiijinayaa iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay labo askari oo mid ka mid ah uu ahaa Sarkaal sare oo ka tirsan Ciidanka Milateriga oo lagu magacaabayay Daahir Sheekh Axmed.
Sarkaalka la dilay ayey wararku sheegayaan inuu ku baxay dagaalka, si uu u kala dhex galo labada ciidan, hase ahaatee intii uu waday waan waanta ayay haleeshay rasaas sababtay inuu u dhinto.
Iska horimaadkaan xalay u dhaxeeyay ciidamada waxa uu salka ku hayay qaad si sharci darro ah oo magaalada la soo geliyeen, kaasoo ay isku qabsadeen labada ciidan, waxaana markii dambe ka dhex bilowday rasaas culus oo qaadatay saacado.
Dagaalkaan ayaa ku soo aadaya xili habeenadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay ciidanka dowladda, gaar ahaan Boolis iyo Milateri, waxaana dagaaladaas ay xaafadaha qaar geliyeen khal khal xooggan iyo cabsi soo wajahay shacabka.
Weli ma jio wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo ku saabsan iska horimaadkii xalay ka dhacay Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir, kaasi oo lagu dilay saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda.